Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ọkụkụ dijitalụ
Naịlọn, Polyamide (PA)
Ihe nkiri na -atụgharị uche
Ihe mbu slide.
Nke abụọ slide nkọwa.
Nke atọ slide nkọwa.
Goldenlaser na-elekwasị anya n'inye ihe ngwọta laser, dijitalụ, na akpaghị aka.
Emeputa nke laser usoro maka ịcha, osise na akara. The ọkachamara na eji egbutu laser CO2 , Galvo laser igwe na digital laser anwụ ọnwụ igwe .
Site na nyocha mbụ na nyocha nke ngwa yana ihe eji mepụta gị na ụlọ ọrụ akọwapụtara maka ọzụzụ maka ndị ọrụ yana ọrụ zuru ụwa ọnụ - Goldenlaser na-enye azịza laser zuru oke, ọ bụghị naanị otu igwe!
Laser anwụ anwụ
Nodị No.: Usoro JMCCJG / JYCCJG
Ezubere usoro a CO2 flatbed laser cutting machine nke emere maka akwa akwa na ngwa nro na-akpaghị aka ma na-aga n'ihu. N'ịgba site gia na ogbe na servo moto, na laser cutter awade kasị elu ọnwụ ọsọ na osooso.
Nodị No.: JMCJG-350400LD
Igwe eji egbutu akwa akwa laser
High nkenke gia na ogbe chụpụrụ. Cha ọsọ ruo 1200mm / s. CO2 RF laser 150W ka 800W. Agụụ ebu usoro. Auto-feeder na erughị ala mgbazi. Adabara ịcha nyo ákwà, iyo ute, polyester, eyi, faiba glaasi, PTFE na ulo oru akwa.
Nodị No.: JYCCJG-1601000LD
Extra Long Cutting Bed - Ọpụrụiche 6 Mita, 10 Mita 13 Mita akwa nha maka ihe ndị ọzọ ogologo, dị ka ụlọikwuu, akwa akwa, parachute, paraglider, canopy, marquee, okwuchi windo, parasail, sunshade, carpets…
Nodị No.: JMCZJJG (3D) 170200LD
Sistemụ laser a na-agwakọta galvanometer na XY gantry. Galvo na-enye ọsịsọ dị elu, etching, perforating and cutting of thin materials. XY Gantry na-enye ohere nhazi nke profaịlụ buru ibu na oke osisi.
Nodị No.: ZJJF (3D) -160LD
Nodị No.: ZJ (3D) -9045TB
CO2 RF metal laser 150W 300W 600W. 3D ike galvanometer akara usoro. Akpaghị aka elu na ala axis Z. Automatic mgbagharị zinc-ígwè alloy n'ụgbụgbọ mmanụ abụ na-arụ ọrụ table.
Nodị No.: ZJ (3D) -15050LD
Nnukwu usoro galvanometer scanning system. Otutu isi mmalite laser ka iwelie oru. Akpaka nri na rewinding - ebu…
Nodị No.: CJGV-160130LD
Vision laser bụ ezigbo maka ịcha digital ebi akwụkwọ sublimation akwa akwa nke niile shapes na nha. Igwefoto na-enyocha akwa ahụ, chọpụta ma mata akara ngosi e biri ebi, ma ọ bụ bulie akara ndebanye aha edepụtara wee belata usoro a họọrọ na ọsọ na izi ezi.
Nodị No.: QZDXBJGHY-160100LDII
Independent Dual Head Camera Laser tingcha Machine
Nodị No.: MZDJG-160100LD
High nkenke ndebanye n'egosi n'ọnọdu na ọgụgụ isi deformation ụgwọ maka n'ụzọ ziri ezi laser ọnwụ nke dai dai sublimation e biri ebi logos, akwụkwọ ozi na nọmba.
Nodị No.: CJGV-320400LD
The nnukwu ọhụụ laser cutter bụ akpan maka dijitalụ ebipụta ụlọ ọrụ - na-amị enweghị atụ ike maka gụchara obosara format digitally e biri ebi ma ọ bụ dai-sublimated akwa ndịna, ọkọlọtọ na adụ signage.
Nodị No.: LC350
Nyefee igwe na-egbutu laser maka ihe nkiri na teepu
Akwa-ọsọ sọrọ isi laser anwụ ọnwụ usoro. Modular na multifunctional ihe niile dị n'otu. Iji CO2, IR ma ọ bụ nzipu ọkụ nke UV iji nye ike na ebili mmiri dị iche iche. Kwesịrị ekwesị maka mpịakọta iji tụgharịa ịkpụ ihe nkiri dị elu, teepu na nrapado.
Nodị No.: LC-350
Dieless laser ọnwụ na converting ngwọta maka labelụ gụchara. Onye na-agụ QR koodu na-akwado mgbanwe na-akpaghị aka na ofufe. Ntuziaka Weebụ na-eme ka ịtọghe na imegharị ahụ dịkwuo mma.
Nodị No.: LC-230
Akpụkpọ ụkwụ & akpụkpọ ụkwụ
Dị ka epoch-eme nkà na ụzụ ọhụrụ, laser na-emepe emepe na-enweghị atụ uru, dochie ọzọ na ndị ọzọ omenala Filiks.
Lelee ebe a maka ozi gbasara ụlọ ọrụ dị mkpa yana akụkọ na ihe omume anyị na nso nso a.
Masks Sublimation Laser Cut Bụrụ akụkụ nke ụdị ahụ
A bịa n'ịmepụta masks sublimation omenala, onye na-egbutu laser nwere ike ịbụ akụkụ dị mkpa nke imepụta iberibe ndị a mara mma. Nke a bụ ụfọdụ echiche maka otu ị ga-esi jiri teknụzụ ọhụrụ a…
Icha akwa nzacha na Laser maka ịdịmma adịchaghị mma
Ọtụtụ ndị na-emepụta akwa nzacha etinyela ego n'ime igwe na-egbutu laser kacha mma site na ọla edolaser, si otú a na-ahazi akwa nzacha maka mkpa onye ahịa ọ bụla na-achọ ma na-ekwe nkwa nzaghachi ngwa ngwa…
Igwe Laser na-enyere aka ịkpụ Vinyl na-ebufe ọkụ
Otu n'ime ọrụ nke onye na-egbu ihe laser na-eme nke ọma bụ igbutu vinyl na-ebufe ọkụ na-enweghị PVC. Laser na-enwe ike igbutu eserese zuru oke na oke nkenke. Mgbe ahụ, enwere ike itinye eserese ahụ n'uwe na igwe ọkụ ọkụ…
Ịmepụta nkenke • Ịga nke ọma
Site na ahụmịhe afọ 20 na ụlọ ọrụ laser, na -aga n'ihu na -emepe ma na -eji teknụzụ dị elu, Goldenlaser abụrụla onye nrụpụta nke igwe laser nwere ikike ịhazi ọkaibe.
> Nyocha igwe laser
Goldenlaser na -enye gị azịza laser ọkachamara maka ụlọ ọrụ ngwa gị akọwapụtara - iji nyere gị aka ịbawanye nrụpụta, mee ka usoro nhazi dị mfe ma nweta uru.
> Nyocha ihe ngwọta laser
Na ahịa esenidụt, Goldenlaser ewepụtala netwọ ahịa ahịa tozuru etozu karịa mba na mpaghara 100 n'ụwa niile, yana ngwaahịa asọmpi anyị yana usoro ihe ọhụrụ na-ere ahịa.
> Mụtakwuo maka Goldenlaser
Nkọwapụta CO2 Laser Machines
Ihe eji arụ ọrụ laser
map-marker Ogige ụlọ ọrụ Goldenlaser, Tianxing Road, Chuanlong Avenue, Huangpi District, Wuhan, Hubei, China